तपाईं एक क्रेडिट कार्ड सुरक्षित सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. प्रगति पैरबाँसाक्रेडिट कार्ड आप्रवासी र अन्य क्रेडिट निर्माण गर्न संघर्ष भएकाहरू प्रत्याभूति गर्दै. तिमी उसलाई पैसा पहिले नै दिन सक्छ किनभने असुरक्षित क्रेडिट कार्ड छैन साँच्चै क्रेडिट छन्, वा भुक्तानी गर्न कसैले प्रतिज्ञा गरेका छन्. तर यो तपाईं राम्रो सन्तुलन निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ. बैंक र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु पनि क्रेडिट कार्ड मिल्यो. पैरबाँसा कम ब्याज दर र सजिलो कम्पनीहरु को अन्य मूल्यभन्दा लागू छ. त्यसैले क्रेडिट यूनियन के.
क्रेडिट यूनियन बैंकहरू जस्तै हो, तर तिनीहरूले मानिसहरूलाई सफल मदत गर्न खोज्नुभएको. सबै खाता को मालिक सँगै क्रेडिट संघ छ. यो कुनै क्रेडिट इतिहास भएका कम आय मान्छे र मान्छे पैसा उधारो वा प्रदान क्रेडिट कार्ड द्वारा क्रेडिट यूनियन मद्दत गर्छ. यो तपाईं पनि पैसा बचत गर्न सहयोग गर्नेछ. तपाईं नजिकै एक क्रेडिट संघ फेला
बंधक मान्छे एक घर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ऋण हो. त्यहाँ एउटा ठूलो बढावा प्रत्येक महिना छ. तर कहिले काँही यो भाडामा तिर्न भन्दा अधिक छ, र अन्त मा, तपाईं आफ्नो घर स्वामित्व हुनेछ! बंधक प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ. तर आफ्नो संघ क्रेडिट तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ. اقرأ عن الرهون العقارية لغير المواطنين. إدارة الإسكان الاتحادية تعلمك عن القروض المختلفة ويمكن أن تعلمك كيفية توفير المال على منزلك الجديد.
सामुदायिक विकास को लागि वित्तीय संस्थाहरू (CDFIs) क्रेडिट यूनियन समान. तिनीहरूले सेवाहरूबाट एक लाभ बनाउन चाहँदैनन्. बरु, तिनीहरूले मानिसहरूलाई सफल मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ. प्रारम्भिक ऋण संस्थाहरू सानो व्यवसाय, नयाँ व्यापार पैसा उधारो, र घरहरू उपयुक्त मूल्यहरु निर्माण तपाईं नजिकै CDFI खोज्न